Virtual City 2: Paradise Resort (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
ကျနော်တို့ Virtual စီးတီး၏ဆက်လက်ရှိသည် လုံးဝပြည့်စုံ (အပြည့်), ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်း၏စျေးနှုန်း Virtual City 2: ပရဒိသုအပန်းဖြေစခန်း (အပြည့်) ကဖြစ်ပါတယ် 4,99 € နှင့်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့။ ဒါဟာပိုပြီးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် ဂန္ PC ဂိမ်း Sim City နှင့်ဆင်တူသည်နှင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် လုံးဝစပိန်အတွက်.
အသစ်သောအဆောက်အ ဦး များ၊ ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းအသစ်များ၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ! သန်းပေါင်းများစွာသောကစားသမားများ၏နှလုံးသားအနိုင်ရပြီးနောက်, ၏ အရောင်းရဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်း Virtual City မြို့ကြီးများ။ Virtual City 2: Paradise Resort တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုနေသာသည်အထိတိုးချဲ့နိုင်သည် ဖလော်ရီဒါကမ်းရိုးတန်းသည်အထိ နှင်းဖုံး Alaska မြေများ, Las Utah ၏ကျောက်တောင်များ နှင့် နီဗားဒါး tundras မိုးနည်းရေရှား.
အောင်မြင်ပါပြီ4ယှဉ်ပြိုင်မှုနေရာများ သင်ဖြည့်ဆည်းနေစဉ်ထူးခြားသောမစ်ရှင်နှင့်အတူ အထူးရည်ရွယ်ချက်များထိုကဲ့သို့သော၏ဖွင့်ပွဲအဖြစ် ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ၏ဆောက်လုပ်ရေး နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်း သို့မဟုတ်၏ဆောက်လုပ်ရေး ရေခဲဟိုတယ်များ။ ရုံးခန်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြား။ သာယာဝပြောသော virtual မြို့တည်ဆောက်ရန်အဆောက်အအုံများအကျဆုံးအကျဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
● နေရာ ၄ ခုတွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့် ၅၂ ဆင့်: Blustery Utah, နေသာဖလော်ရီဒါ, Snowy Alaska, Steamy နီဗားဒါး
● ၂၉ ခု မစ်ရှင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော
● 73 အဆောက်အ ဦး အမျိုးအစားများ
● ကုန်ပစ္စည်း 42 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး
● ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 12 ဘာ ဦး ဆောင်လမ်းပြရမယ်
● 98 အထူးတာဝန်များကို ကျော်လွှားရန်
● 45 အဆောက်အ ဦး များနှင့်ခေတ်မီ ဘာဖွင့်ရမလဲ
ဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်: အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်, español, ပေါ်တူဂီ, ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ, ရုရှား, ကိုးရီးယား, တရုတ်, ဂျပန်။
updated: 16 / 10 / 2012
အရွယ်: 329 ကို MB
ဘာသာစကားပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: G5 ဖျော်ဖြေရေး AB
compatibility: OS X 10.6.6 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Virtual City 2: Paradise Resort (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့
သင့်ရဲ့ iPhone မှာအသံမှတ်စုများကိုဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်မလဲ